Allegri oo ka warbixiyay waxa looga baahan yahay inay sameyso Juventus, si ay kaga gudubto kooxda Atletico Madrid – Gool FM
Allegri oo ka warbixiyay waxa looga baahan yahay inay sameyso Juventus, si ay kaga gudubto kooxda Atletico Madrid
Dajiye March 12, 2019
(Yurub) 12 Maarso 2019. Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay u baahnaan doonto inay bixiso qaab ciyaareed heer sare ah ee isugu jira farsamo iyo jir ahaanba, si ay kaga soo gudbaan wareega siddeeda ee tartanka Champions League kooxda Atletico Madrid.
Hadalka Massimiliano Allegri ayaa wuxuu yimid kadib shir jaraa’id uu kasoo muuqday, wuxuuna muujiyay kalsoonida weyn uu ku qabo in kooxda Juventus ay ka gudbi karto guuldaradii 2-0 ahayd ee kulankii lugta hore, isagoo dhinaca kale tilmaamay in ku tiirsanaanta Cristiano Ronaldo ay faa’iido weyn u noqon doonto.
“Cristiano Ronaldo wuxuu heystaa goolal badan uu kaga dhaliyay labadiisa lugood tartanka Champions League, joogitaankiisa ciyaartan waxay inoo tahay faa’iido aad u weyn anaga ahaan”.
“Waa kulan muhim ah, waa xidiga ku haboon kulamada noocan oo kale ah, sidaasi darteed waxaan ku tiirsanaan doonaa isaga iyo ciyaartoyda kale, si aan u soo gudubno”.
“Kooxdeyda waxaa looga baahan yahay inay kasoo kabato guuldarada kulankii lugta hore isla markaana ay u gudubto wareega xiga ee tartankan”.
“Waxaa loo baahan yahay wax qabad geesinimo leh ee bilawga ilaa iyo dhamaadka ciyaarta, sidaas darteed waxaan u ciyaari doonaa kulankan iyadoo aan siin doono ahmiyad weyn iyo maskax, isla markaana aanan nagu jiri doonin wax deg deg ah”.
“Waxaan u baahanahay inaan ka taxadirno kulanka aan la ciyaareyno kooxda Atletico Madrid, si aan u fahano jihada ay ciyaarta ka socoto, waa inaan la soconaa daqiiqadaha ciyaarta, isla markaana aan ku fikirno in natiijada kulankii lugta hore aan dhinaca kale u dhigno, waana waxa nalaga doonayo inaan sameyno”.
HORDHACA: Kulanka maanta dhex mari doono kooxaha Jeenyo Vs Heegan
Klopp oo dhaar ku maray inuu sameyn doono wax walba uu ku samata-bixin karo Liverpool kulanka Bayern Munich